Na-aga otutu video metụtara isiokwu na isi forums, ị ga-doro anya na-ahụ na ọtụtụ n'ime ajụjụ ndị nwere ọtụtụ ihe na-eme na YouTube Videos. Ọtụtụ n'ime ha kpọmkwem ka ọ na-agbalị mbubata YouTube videos ka iMovie. Ezie na e nwere ọtụtụ uru na ike na-abịa site ọma importing a YouTube video ka iMovie, ọtụtụ ndị na-akọ a dum usu nsogbu mgbe ha na-agbalị.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na ọtụtụ n'ime nsogbu ndị a nwere ike mere n'ihi na ọtụtụ akụkụ site na eziokwu na YouTube videos na-enwekarị FLV Ọkpụkpọ na N'ihi ya apụghị dezie na iMovie. Apple si iMovie-adịghị aghọta FLV formats. Nke a adịghị Otú ọ dị pụtara na ị na-apụghị dezie gị YouTube video na iMovie.
Ke ibuotikọ emi, anyị na-aga na-enye gị a dị mfe ngwọta maka nsogbu a. Nke a dị mfe ngwọta a maara dị ka Wondershare Video Converter Ultimate na dị ka anyị ga-ahụ na nduzi n'okpuru, ọ dị mfe iji na ukwuu irè.
Part 1: Olee mbubata YouTube videos ka iMovie iji Wondershare Video Converter Ultimate
Part 2: Olee bulite iMovie video ka YouTube
Nzọụkwụ mbụ bụ ibudata na ịwụnye Wondershare Video Converter Ultimate. Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ ime ya.
Nzọụkwụ otu: Ịnwere ike ibudata .exe faịlụ site ebe a
Nzọụkwụ Abụọ: Ozugbo download zuru ezu, na-emeghe .exe faịlụ. Pịa na Ee-amalite nwụnye usoro. Ị ga-ahụ ndị na-esonụ window.
Nzọụkwụ atọ: Gbaa mbọ hụ na "M na-agụ ma na-anabata Wondershare License Agreement" na-enyocha n'ihu na ịpị on wụnye
Nzọụkwụ anọ: Chere maka nwụnye usoro iji wuchaa. O nwere ike buru a mgbe ya biko-enwe ndidi. Ị kwesịrị ị na-ahụ nke a window ozugbo usoro zuru ezu.
Ugbu a ka anyị ibudatara na arụnyere anyị ngwá ọrụ, ọ bụ oge ibudata YouTube video anyị ga na-converting. Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ ime ya.
Nzọụkwụ Otu: Pịa Malite Ugbu a, na window n'elu ẹkedori Wondershare Video Converter Ultimate.
Nzọụkwụ Abụọ: Na ihe nchọgharị gị, nweta YouTube na-ahụ video ịchọrọ ibudata. Na-ekiri ndị video na YouTube na Pịa na "Download Ugbu a," bọtịnụ na n'elu nke video ibudata ya ma ọ bụ Nhọrọ ịgbakwunye URL ibudata. Anyị na-aga na-eji "Tinye URL" usoro.
Nzọụkwụ atọ: Pịa na "Tinye Url" na mgbe ahụ họrọ ọnọdụ ịzọpụta faịlụ. The URL ga-akpaghị aka-adị n'ebe ọ bụ ezie na ị kwesịrị ị na ego iji hụ t bụ nri otu. The Ndi an-kpọ faịlụ ụzọ ịzọpụta faịlụ a ga-C: \_ ọrụ \_ Public \_ Documents \_ Documents \_ Wondershare Video Converter Ultimate \_ mmepụta \_ Download.
Ị nwere ike iji onye a ma ọ bụ mgbanwe site na ịpị bọtịnụ nri na-esote "Save ka" igbe. M agbanweela m ndị C: \_ Ọrụ \_ ọrụ \_ Downloads dị nnọọ ka ọ dịkwuo mfe ịchọta video.
Nzọụkwụ anọ: Pịa "OK" ma ọ bụrụ na unu nwere obi ụtọ na ihe niile na-eche maka download mezue.
Nzọụkwụ ise: The download ekwesịghị ewe oge, mgbe nke ị ga-ahụ gị video ebe a.
Tọghata youtube video
Ugbu a anyị nwere anyị YouTube video, anyị chọrọ iji tọghata ya iMovie format tupu importing. Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ ime nke a.
Nzọụkwụ otu: Na windo n'elu click on "tọghata" na isi menu.
Nzọụkwụ Abụọ: Tinye na video anyị ibudatara YouTube. Ị nwere ike ma ikpuru na dobe video ma ọ bụ pịa "Tinye Files" iji chọta ya. Na ala panel, ị nwere ike họrọ "mmepụta nchekwa" ma ọ bụ na-eji ndabara ụzọ.
Nzọụkwụ atọ: Na Left Kọlụm "mmepụta Format" họrọ iMovie Format si dobe ala menu wee pịa "tọghata."
Nzọụkwụ anọ: Ozugbo usoro zuru ezu, ị ga-ahụ nke a window.
Import video ka imovie
Ugbu a, na anyị nwere video na iMovie enyi na enyi format anyị nwere ike ugbu mbubata ya ka iMovie.
Nzọụkwụ Otu: Open iMovie
Nzọụkwụ Abụọ: Họrọ File> Bubata
Nzọụkwụ atọ: Họrọ Movies na mgbe ahụ họrọ Video anyị dị converted.
Ugbu a, ka bulite anyị iMovie video ka YouTube. I nwere ike ime nke a kpọmkwem site iMovie. Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ bulite gị video.
Nzọụkwụ Otu: Mepee iMovie video anyị dị nnọọ kere. Kụrụ "Share" na iMovie na a mmapụta window ga-apụta.
Nzọụkwụ Abụọ: Na Pop-elu window ịrịba ama na gị na YouTube akaụntụ na ibà ọ bụla ọzọ dị mkpa na ozi banyere video.
Nanị Pịa na "Asuanetop" na gị video ga-uploaded YouTube.
> Resource> iMovie> Olee mbubata YouTube Videos ka iMovie